I-China Coil feeders, i-NC Servo Roll feeder, iServo feeder, i-feed ye-NC, umvelisi wesibonelelo se-Servo Roll
Inkcazo:I-NC Servo Roll feeder,Isibonelelo seNc Servo Roll Sheet,Umxhasi weServo Roller,Umncedi kaNc Servo,I-NC Servo,I-Coil feeders
Home > Imveliso > Cinezela abaxhasi > Umxhasi weServo Roll
Iintlobo zeMveliso ze- Umxhasi weServo Roll , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-NC Servo Roll feeder , Isibonelelo seNc Servo Roll Sheet ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umncedisi wePneumatic Servo feeder  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa amandla weServo Roll  Qhagamshelana Ngoku
UkuNikwa kweeRholo ngeNc Servo  Qhagamshelana Ngoku
I-Metal Sheet servo feeder  Qhagamshelana Ngoku
IiServo Roll feeders  Qhagamshelana Ngoku
IiServo zeRoll Fees  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi weCoil NC Servo  Qhagamshelana Ngoku
Isondli seRoll Server Roll esizenzekelayo  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa ukutya weServo  Qhagamshelana Ngoku
Isibonelelo seNC Servo Roller  Qhagamshelana Ngoku
Amaphepha eServo e-Sheet  Qhagamshelana Ngoku
I-NC Servo Roll feed  Qhagamshelana Ngoku
I-NC Servo Roller feed  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa nge-NC Servo  Qhagamshelana Ngoku
UMxhasi weServo oZenzekelayo  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa weServo  Qhagamshelana Ngoku
Isibonelelo seNC Servo somshicileli  Qhagamshelana Ngoku
I-Metal Strip okuzenzekelayo i-Nc Servo Roll  Qhagamshelana Ngoku
Punch Cinezela umatshini wokuTya iServo  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa umbane we Metal Punch  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa umbane weServo oSebenzayo  Qhagamshelana Ngoku
Umncedisi wePneumatic Servo feeder
IPHONDO LESIFUNDO SE- RVO FEATER Umncedisi we-Pneumatic Servo feed oluzenzekelayo lolunye uhlobo smart kwaye kulula ukuba usebenze ngalo umatshini wokuhambisa ukutya kwimakethi. Ingatya ukutya okubhaliweyo kwizixhobo ezinobubanzi obuyi-1300mm,...
Umatshini wokuhambisa amandla weServo Roll
I-NC SE RVO RO LL FEEDS I-RNC lolunye uhlobo oluhle kwaye kulula ukuba lusebenzise umatshini wokuhambisa ukutya kwimakethi. Ingatya ukutya okubhaliweyo kwizixhobo ezinobubanzi obuyi-1300mm, ubukhulu ukuya kuthi ga kwi-6.0mm, max. isantya sokondla...
UkuNikwa kweeRholo ngeNc Servo
I-Metal Sheet servo feeder
METAL SHE ET SER IVOTI uMondli I-RNC lolunye uhlobo oluhle kwaye kulula ukuba lusebenzise umatshini wokuhambisa ukutya kwimakethi. Ingatya ukutya okubhaliweyo kwizixhobo ezinobubanzi obuyi-1300mm, ubukhulu ukuya kuthi ga kwi-6.0mm, max. isantya...
IiServo Roll feeders
I-SER VO ROLL FEE DERS I-Servo Roll feeders yenye yezona zixhobo ezithandwayo zeservo zokuthenga kunye nohlobo lokukhulula umatshini kwimakethi. Inokwondla i-sheet iron coil material ebanzi ukuya kuthi ga ku-500mm, ubukhulu buye kuthi xhaxhe...
IiServo zeRoll Fees
I-SER VO RO LL FE EDS Amandla eServo Roll yenye yezona zixhobo ezithandwayo zeservo zokuthenga kunye nohlobo lokukhulula umatshini kwimakethi. Inokwondla i-sheet iron coil material ebanzi ukuya kuthi ga ku-500mm, ubukhulu buye kuthi xhaxhe...
Umxhasi weCoil NC Servo
C OIL N C WENKONZO YOKUZIPHATHA I-RNC lolunye uhlobo oluhle kwaye kulula ukuba lusebenzise umatshini wokuhambisa ukutya kwimakethi. Ingatya ukutya okubhaliweyo kwizixhobo ezinobubanzi obuyi-1300mm, ubukhulu ukuya kuthi ga kwi-6.0mm, max. isantya...
Isondli seRoll Server Roll esizenzekelayo
I- AUTOMATIC NC SERVO RO LL FEEDER I-RNC lolunye uhlobo oluhle kwaye kulula ukuba lusebenzise umatshini wokuhambisa ukutya kwimakethi. Ingatya ukutya okubhaliweyo kwizixhobo ezinobubanzi obuyi-1300mm, ubukhulu ukuya kuthi ga kwi-6.0mm, max. isantya...
Umatshini wokuhambisa ukutya weServo
INKONZO YOKUXELWA KWENKONZO YAMALUNGU Umatshini wokuhambisa ukutya weServo ungomnye woomatshini bokutya abaziwayo kwi-servo kunye nohlobo lokukhulula umatshini kwimakethi. Inokwondla i-sheet iron coil material ebanzi ukuya kuthi ga ku-500mm,...
INKONZO KA- R WOKUFUNDA NGOKUGQIBELA N C Servo Roller Isondli luhlobo olunye smart kwaye kulula ukuba usebenze ngalo umatshini wokuhambisa ukutya emarikeni. Inokukhulisa imitya yentsimbi ukuya kuthi ga kwi-6.0mm kunye noMax. Isantya sokondla...
Amaphepha eServo e-Sheet
Ishidi Metal Servo feed yenye yezona zinto zithandwayo zeservo zokuthengisa kwimakethi, Inokutyisa iphepha lesinyithi se-coil eziphathekayo ukuya kuthi ga kwi-1300mm, ubukhulu buye kuthi xhaxhe ku-6.0mm, kunye nobukhulu. isantya sokondla i-20m /...
I-NC Servo Roll feed
I-NC Servo Roll feed yenye yoomatshini abathandwayo be-servo feed kwimakethi, Inokutyisa iphepha lezinto zentsimbi ye-sheet coil ububanzi ukuya kuthi ga kwi-1300mm, ubukhulu buye kuthi xhaxhe ku-6.0mm, bunomda max. isantya sokondla i-20m / min....
I-NC Servo Roller feed
IMayflay ilayishe indawo yethu ye- NC Servo R oller Feed kwindawo ezahlukeneyo zelizwe ukuze iphathe iphepha ububanzi ukusuka kwi-100-1600mm nobungqingqwa bayo buyi-0,0 kuye ku-6.0 mm ngokuchanekileyo kakhulu ngu-0,01 mm. Inqaku le- NC Servo Roller...
Umatshini wokuhambisa nge-NC Servo
Umatshini wokutya we-NC Servo ngomnye woomatshini abathandwayo be-servo kwimarike, Unokutyisa iphepha lesinyithi se-coil material ukuya kuthi ga kwi-1300mm, ubukhulu buye kuthi xhaxhe ku-6.0mm, kunye no-max. isantya sokondla i-20m / min. Ukusebenza...
UMxhasi weServo oZenzekelayo
UMxhasi weServo oZenzekelayo IiServo Roll feeders zenziwe phakathi kwe-100mm ukuya kwi-1200mm ububanzi. Ulwakhiwo lweenkqubo zikhethwe ngokobubanzi nobubanzi bephepha. Emva kolu khetho ngenxa yesantya sokujikeleza kokujikeleza kunye nokuchaneka...
Umatshini wokuhambisa weServo
Umatshini wokudibanisa ne-Mevlay Servo ububanzi ukusuka kwi-200mm ukuya kwi-1500mm, ubukhulu bezinto ukusuka ku-0.3 ukuya kwi-6.0mm bunokucocwa. Ilungele iinxalenye ze-elektroniki , izixhobo zokunxiba, iindawo zokwakha, iimveliso zezithuthi kunye...
Isibonelelo seNC Servo somshicileli
Umatshini wokudibanisa ne-serflay NC we-Mayflay NC usebenzisa ubuchule obutsha, ubugcisa obutsha bokuvelisa ukuzisa eyona migangatho iphezulu, ulondolozo olusezantsi, olona luhlu lwezoqoqosho lwe-servo. Icwecwe kwaye ilula ukuyifaka. Kulula...
I-Metal Strip okuzenzekelayo i-Nc Servo Roll
Ukutya okuprinta okushicilelwa kweServo kunciphisa ixesha lokuseta, ukuphucula ukuchaneka, kunye nokunciphisa ukungasebenzi kakuhle. Ukuseta kulula kwaye kuququzelela utshintsho olukhawulezileyo lokufa. Ubude besondlo bucwangciswa ngokulula ukusuka...
Punch Cinezela umatshini wokuTya iServo
I-PUNCH PRE SS YENKONZO YOKUZONWABISA UQHELEKILEYO D Umatshini wokuprinta iPunch Press Servo ngowona matshini uthandwayo weServo kwimarike, Unokutya ngetsimbi yetsimbi ye-coil ububanzi ukuya kuthi ga kwi-1300mm, ubukhulu buye kuthi xhaxhe ku-6.0mm,...
Umatshini wokuhambisa umbane we Metal Punch
Metal Punch IMizekeliso umAmonikazi Feed Machine iinkcukacha: 1. Zilungele zonke iintlobo zensimbi yamaphepha kunye nobukhulu obahlukeneyo kunye nobude bokutya; 2. Ilungele isantya esiphezulu kunye nobude obude bokutya, ukuphucula isantya kunye...
Umatshini wokuhambisa umbane weServo oSebenzayo
Umatshini wokuhambisa umbane weServo othomathikhi wenzelwe ukuqhuba ngokukhawuleza, ngokukhawuleza, imveliso echanekileyo. Ukutya okuprinta okushicilelwa kweServo kunciphisa ixesha lokuseta, ukuphucula ukuchaneka, kunye nokunciphisa ukungasebenzi...
KwiChina Umxhasi weServo Roll Abaxhasi
Umatshini wokuhambisa ukutya weServo uluhlobo olunye olu smart kwaye olusebenzayo kumatshini wokuhambisa ukutya kwimakethi. Inokukhulisa imitya yentsimbi ukuya kuthi ga kwi-6.0mm kunye noMax. Isantya sokondla sifikelela kwi-30m / min.
Ukusebenza ngolawulo lweNombolo yeComputerize yi-PLC yenkqubo evela kwi-MITSUBISHI eyenziwe eJapan, inokuqinisekisa +/- 0,01mm ukuchaneka kokuphakama okuphezulu. Kubaluleke kakhulu ukubala ngokuthe ngqo ubude bephepha ngexesha lokuphathwa kwensimbi yephepha kunye nokusika ubude, kwaye xa ujongene nomatshini wokushicilela.
Oku kucacileyo kunokufezekiswa kuphela ngemoto enesithuba esifanelekileyo sokujika, njengemoto ye-servo. Senza umqhubi wokujonga ngokuchanekileyo okuphezulu ngokusebenzisa amandla e-high-resolution servo motors. Siyila oomatshini bethu ngokomgangatho, ububanzi, kunye nobukhulu bezinto oza kuziqhelanisa.
Gxila ngokuthe ngqo umda wokutya okungama-20 ubude kwiscreen sokubonisa kwaye emva koko unokufikelela kubude bokutya obufunekayo, iMax. Ukuphakelwa ubude obuyi-9999.99mm.
Ngokwesiqhelo i-NC servo feeder idibanisa umqondiso wohlengahlengiso ovela kumatshini wokusika okanye kumatshini wokushicilela ombane.Ukukhupha iintlobo ezimbini ezahlukeneyo, ukukhutshwa kwe-pneumatic kunye nokukhutshwa komatshini.
I-NC Servo Roll feeder Isibonelelo seNc Servo Roll Sheet Umxhasi weServo Roller Umncedi kaNc Servo I-NC Servo I-Coil feeders I-NC Servo Roll feed NC Servo Roller Feeder